ထူးဆန်းထွေလာ – Thutastar
အားလုံး စိတ်ဝင်စားရမယ့်ည တစ်ည.. ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ ညမှာ လ အစိမ်းရောင် ဖြစ်မည်တဲ့..
Comments Off on အားလုံး စိတ်ဝင်စားရမယ့်ည တစ်ည.. ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ ညမှာ လ အစိမ်းရောင် ဖြစ်မည်တဲ့..
ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ထူးဆန်းစွာ အစိမ်းရောင် သန်းနေမည့် လကို မြင်တွေ့ရမည် ယခုလာမည့် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ညမှာတော့ ထူးထူးခြားခြား နှစ်ပေါင်း ၄၂၀ မှ တစ်ကြိမ်သာ မြင်တွေ့ခွင့်ကြုံရသည့် အစိမ်းရောင်သန်းနေးသည့် လကို ညအခါ မြင်တွေ့ရမည်ဆိုသော သတင်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို စိတ်ဝင်စားသွားစေပါတယ်။ သတင်းအရ နေဂြိုလ်ကနေ ရေကြည့်ရင် ခုနှစ်လုံးမြောက်ဖြစ်တဲ့ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုလ်ဟာ လရဲ့အနီးနားကို ချဉ်းကပ်လာနေပြီး လနဲ့ ယူရေးနပ်စ်ကြားမှာ အစိမ်းရောင် ရောင်စဉ်များက လနဲ့ ၄ ဒီဂရီအနေအထားမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကနေ ကြည့်လျှင် အစိမ်းရောင်သန်းနေသည့် လကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် မျှဝေသူအများဆုံး သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေသည်။ အဆိုပါသတင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး အာကာသကျွမ်းကျင်သူများက ဒါဟာလုပ်ဇာတ်သတင်းသာဖြစ်ပြီး အစိမ်းရောင်လသာမည်ဆိုသည်မှာ
အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့ ပုံအသစ်တွေ ထပ်တင်လိုက်တဲ့ လေယာဉ်မှူးမလေး မေပြည့်စုံအောင်
Comments Off on အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့ ပုံအသစ်တွေ ထပ်တင်လိုက်တဲ့ လေယာဉ်မှူးမလေး မေပြည့်စုံအောင်
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးနှစ်သက်မှုကို အပြည့်အ၀ရရှိထားပြီး လေယာဉ်မှူးမလေးအဖြစ် နာမည်ကြီး လူသိများခဲ့တဲ့ မေပြည့်စုံအောင်ဟာ သူမရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ အမြဲလိုလို အလန်းစားပုံတွေကို ဖော်ပြလေ့၇ှိပါတယ်။ သူမကို အ၀တ်အစားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်ကြသူတချို့ရှိခဲ့ပေမယ့် သူမကတော့ သူစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဝတ်စားတက်ပြီး နေရာဒေသအလိုက် ၀တ်စားတက်ကြောင်းနဲ့ သူမရဲ့ ပညာအရည်အချင်းတွေနဲ့ သူမရဲ့ ၀တ်စားပုံတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှမသတ်ဆိုင်ကြောင်း သူမကိုလဲ အတုယူပါ ၊သူမလိုလိုက်နေပါလို့မပြောဖူးကြောင်းတွေကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကနေ ရေးသားတုန့်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမဟာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် လှလှလေးကြောင့် အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အင်စတာဂရမ်မှာ ယနေ့သူမတင်ထားခဲ့တဲ့ ပုံအသစ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သိအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ချစ်ရပါသောချစ်ပရိသတ်ကြီး ကျေးဇူးပါနော်။ KKK(momolay) Source – Instagram
သိပ္ပံပညာနည်းနဲ့ မဖြေရှင်းနိုင်သေးသော သဘာဝ ဖြစ်စဉ် ( ၁၀ ) ခု
Comments Off on သိပ္ပံပညာနည်းနဲ့ မဖြေရှင်းနိုင်သေးသော သဘာဝ ဖြစ်စဉ် ( ၁၀ ) ခု
အဖြေမရှိသေးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်းသင်ကြားဖူးလား ။ ကောင်းကင်ကနေ သတ္တဝါတွေပြုတ်ကျလာတာမျိုး , Giza ပိရစ်မစ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ ဘယ်ကထွက်နေမှန်းမသိတဲ့အပူလိုမျိုးအရာတွေပေါ့ ။ တစ်ချို့ဖြစ်ရပ်တွေမှာတော့ အဖြေတွေ့ရှိခဲ့ရပေမယ့်အခုဖော်ပြမယ့် ဖြစ်ရပ်တွေကတော့ သိပ္ပံနည်းကအဖြေမရှိသေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သိပ္ပံနည်းကျမဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ် ၁၀ ခုကိုကြည့်လိုက်ရအောင် ။ 1. Mammatus တိမ် Mammatus တိမ်ဆိုတာကတော့ တိမ်အလွှာတွေရဲ့အောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အဖုအခွက်တွေပါပဲ ။ သူတို့ဟာ မိုးတိမ်တွေထက်လေးလံကြပြီးတော့ ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုမျိုးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ် ။ မုန်တိုင်းမတိုက်ခင်နဲ့တိုက်ပြီးအချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင် ဒီတိမ်တွေကိုကောင်းကင်ပေါ်မှာတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ 2.Giza ပိရမစ်အတွင်းမှ အပူရှိန် သိပ္ပံညာရှင်တွေဟာ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ ခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ မဟာ Giza ပိရမစ်ကြီးကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာ ထူးဆန်းတဲ့အပူချိန်တစ်ခုကိုခံစားရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီအပူချိန်ဟာ ဘယ်ကနေထွက်ရှိလာတာလဲဆိုတာကတော့ ထူးဆန်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေတုန်းပါပဲ
မနက်ဖြန်မှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဂြိုလ်သိမ်ကြီးတစ်ခု ကမ္ဘာနဲ့အလွန်နီးကပ်စွာ ဖြတ်သန်းမည်
Comments Off on မနက်ဖြန်မှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဂြိုလ်သိမ်ကြီးတစ်ခု ကမ္ဘာနဲ့အလွန်နီးကပ်စွာ ဖြတ်သန်းမည်
အမေရိကန်နိုင်ငံက Empire State Building အရွယ်အစားလောက်ရှိတဲ့ ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားကြီးတစ်ခုဟာ မနက်ဖြန်(၈-၃-၁၈)မှာ ကမ္ဘာနဲ့အလွန်နီးကပ်စွာ ဖြတ်သန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ 2017 VR12 လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ယင်းဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားဟာ တစ်နာရီကို မိုင်(၁၄,၀၉၂) အလျင်နှုန်းနဲ့ ကမ္ဘာမှအကွာအဝေး မိုင်(၉)သိန်းကနေ ဖြတ်သန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားဟာ အချင်းပေ (၇၀၀) ကနေ (၁,၅၀၀) ကြားရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့ နယူးယောက်က အမြင့်ပေ(၁,၄၅၀) ရှိတဲ့ Empire State Building ထက်တောင်ကြီးမားနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ နာဆာကတော့ VR12 ဟာ ကမ္ဘာနဲ့အလွန်နီးကပ်စွာဖြတ်သန်းမှာဖြစ်တာကြောင့် ကမ္ဘာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ထိုဧရာမဂြိုလ်သိမ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာနဲ့တော့ တိုက်မိနိုင်ခြေမရှိဘူးလို့ နာဆာက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ နာဆာကတော့ အခုလိုဂြိုလ်သိမ်ကြီးကို လေ့လာရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ အနာဂတ်အာကာသတွင်း စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေအတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက VR12
ခေါင်းထဲကနေ ကံကောင်းစွာ သေရွာပြန် ၃ နှစ်သမီးလေး
Comments Off on ခေါင်းထဲကနေ ကံကောင်းစွာ သေရွာပြန် ၃ နှစ်သမီးလေး
သေဆုံးသွားပြီလို့ ပြောတဲ့ အသက် ၃ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေးရဲ့ အသုဘ အခမ်းအနားတခုကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Zamboanga del Sur ဒေသ Auroa အရပ်က ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တခုမှာ ကျင်းပချိန် အဲဒီ မိန်းကလေး ငယ်လေးဟာ ပြန်လည် နိုးထပြီး အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ ၃ နှစ်သမီးလေးဟာ အဖျားရက်ရှည် ခံစား ရပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ကပဲ ဆေးရုံမှာ တက် ရောက် ဆေးကုသမှု ခံယူရင်း ဆရာဝန်က ဆုံးပါးသွား ပြီ လို အသိပေးကြေညာခဲ့တာကြောင့် သူ့ကို သဂြိုလ်ဖို့ ဈာပန အခမ်းအနားကျင်းပနေခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ၃ နှစ် သမီးလေးဟာ အသက်ရှုလာခဲ့တာကြောင့် သူ့အဖေကလည် ခေါင်းထဲ ထည့်ထားတဲ့
မီးသင်္ဂြိုလ်ခဲ့ပြီး တစ်လအကြာ မိသားစုကို လာတွေ့တဲ့ ကွယ်လွန်သူ
Comments Off on မီးသင်္ဂြိုလ်ခဲ့ပြီး တစ်လအကြာ မိသားစုကို လာတွေ့တဲ့ ကွယ်လွန်သူ
သားဖြစ်သူသေဆုံးသွားတဲ့အတွက် ရုပ်အလောင်းကို မီးသင်္ဂြိုလ်ပြီး တစ်လအကြာမှာ သေဆုံးသွားသူဟာ မိသားစုကို လာတွေ့တာကြောင့် တမိသားစုလုံး ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားခဲ့ရတဲ့ သွေးပျက်စရာအဖြစ်ပျက်တစ်ခု ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသူ ဆာခရွန်ဆာချီဝါ ဆိုသူဟာ သူ့ကိုမီးသင်္ဂြိုလ်ခဲ့ပြီး တစ်လအကြာ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့က ရုတ်တရက် အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ မိသားစုတစ်ခုလုံး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးက သရဲခြောက်ခံရပြီလို့ ခံစားလိုက်ရချိန်မှာ ဆာခရွန်ရဲ့ ညီဖြစ်သူ ချာရွန်လက်ဒီက သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မဝံ့မရဲနဲ့ တို့ထိကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သရဲမဟုတ်ပဲ လူစင်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ အခါမှာတော့ မယုံကြည်နိုင်စရာ အဖြစ်တစ်ခု ကြုံခဲ့ရပြီဆိုတာ သိလိုက်ကြရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဆာခရွန်ဟာ မိသားစုနဲ့ အဝေးမှာ အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလထဲမှာ နန်လောင်းရဲဌါနက ဆာခရွန်ဟာ အစာအိမ်ရောဂါနဲ့ ဆေးရုံးပေါ်မှာ သေဆုံးသွားပြီဟု မိသားစုထံအကြောင်းကြားလာပြီး
ရထားအောက်ကနေ အံ့အားသင့်ဖွယ် အသက်ရှင်လျှက် ပြန်ထွက်လာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်
Comments Off on ရထားအောက်ကနေ အံ့အားသင့်ဖွယ် အသက်ရှင်လျှက် ပြန်ထွက်လာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဘေဂျင်းမြို့မှာတော့ အံ့အားဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းအရာကတော့ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ ရထားအောက်ကနေ အသက်ရှင်လျှက် ပြန်ထွက်လာသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ကို မျက်မြင်ကြုံခဲ့ရသူများ အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်သတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ QQ News အရ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ မနက်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် တစ်ဦးဟာ ရထားစင်္ကြန်ပေါ်ကနေ အမှတ်တမဲ့ ရထားသံလမ်းပေါ် ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရထားတစ်စင်းဟာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းနှင်လာခဲ့ပြီး ဘူတာစင်္ကြန်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရထားမောင်းသူဟာ ကိုယ်ဝန်သည် ပြုတ်ကျတဲ့ နေရာအရောက်မှာတော့ အရေးပေါ် ဘရိတ်အုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆိုပါ ကိုယ်ဝန်သည်ဟာ ဒဏ်ရာအနာတရ မရှိဘဲ ရထားအောက်ကနေ တွားသွားပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ မျက်မြင်သက်သေများရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ
Comments Off on စိမ်းလဲ့ကန်သာ ၅ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှာ သေဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေ အိမ်ကြီးမှာ ရှိနေသေးသလား
“ကျွန်တော် ညအိပ်နေတာ သူတို့ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့အခန်းမှာပါ။ ဒီအိမ်ကြီးမှာ သူတို့တွေရှိနေသေးတယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ် . . .” ၂၀၀၈ ခုနှစ်က နိုင်ငံကျော် ၅ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း ခြံအမှတ် ၁၂၆ ၌ အဆင့်မြင့် စားသောက်ဆိုင်ကြီးတခုဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ နေအိမ်တွင် ၂၀၀၈ မတ် ၃ ရက်နေ့က မိုးကုတ်သူဌေးကြီး ဦးမြမောင်၏ သမီး ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် (အသက် ၅၈ နှစ်) ၊ သားမက် စော်ဘွားနွယ်ဝင် ဦးစ၀်ကြည်ဖ (၆၀ နှစ်) ၊ မြေးနှစ်ဦး ဒေါ်မြစန္ဒာ (၃၆ နှစ်) ၊ မနှင်းပွင့်အေး (၂၇ နှစ်) နှင့် အိမ်အကူ မအယ်ဖော
အပျိုစင်ဘဝကို လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ကြသူ ၈ ဦးအကြောင်း
Comments Off on အပျိုစင်ဘဝကို လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ကြသူ ၈ ဦးအကြောင်း
အမျိုးသမီး တစ်ဦး အတွက် အပျိုစင် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ဟာ ဘာနဲ့မှ လဲလှယ် လို့ မရတဲ့ တန်ဖိုးကြီး ရတနာ အဖြစ် တင်စားလေ့ ရှိ ကြပါတယ်။ ငွေကြေးကြောင့် အပျိုစင် ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ရ သူတွေ အများအပြားရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့ အမျိုးသမီး တွေဟာ နောက်ဆုံး အချိန်မှာ ငွေကြေးနဲ့ အပျိုစင် ဘ၀ကို မလဲနိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုတာ မျိုးလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အပျိုစင် ဘ၀ကို ရောင်းချ မှုတွေ ဟာ မကြာခဏ ဖြစ်ပွား နေဆဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု ကျယ်ပြန့်လာ ပြီးတဲ့နောက် မှာ အပျိုစင် ဘ၀ကို
ပျံလွန်တော်မူပြီး နှစ်လအကြာ ဘုန်းတော်ကြီးရုပ်ကလပ် ပြုံးယောင်သမ်းလာ
Comments Off on ပျံလွန်တော်မူပြီး နှစ်လအကြာ ဘုန်းတော်ကြီးရုပ်ကလပ် ပြုံးယောင်သမ်းလာ
ပျံလွန်တော်မူပြီး နှစ်လအကြာ ဘုန်းတော်ကြီးရုပ်ကလပ် ပြုံးယောင်သမ်းလာ ဘန်ကောက်၊ ဇန်န၀ါရီ – ၂၃ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို ပျံလွန်တော်မူပြီး နှစ်လအကြာ ဒကာများက ပြန်လည်ဖော်ယူချိန်မှာ ပြုံးယောင်သမ်းနေတာကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၂၃ Mirror သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လျန်ဖော်ပိုင်ယန် ဘွဲ့အမည်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးက သက်တော် ၉၂ နှစ်အရောက် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်၌ နိုဝင်ဘာ ၁၆ မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ ။ ပိုင်ယန် က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများစွာကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကုန်ဆုံးဖြတ်သန်းခဲ့တာပါ။ ထိုင်း ရိုးရာ ဘုန်းတော်ကြီးပျံ အခမ်းအနားအရ နှစ်လကြာထားပြီး ပြန်လည်ဖော်ယူခဲ့ရာမှာ ရုပ်ကြွင်းက ပျက်ဆီးမှုမရှိသေးသလောက် ဖြစ်နေသလို မျက်နှာမှာလည်း ပြုံးယောင်သန်းနေခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့